Yan Aung: မ-၃ (သို့မဟုတ်) လွမ်းလို့ရေးတဲ့စာ
“မ..” အသံလေးတွေက အရင်ကလို ချစ်ချာနွဲ့နွဲ့လေးဘဲလား..!!
“မ..” အပြုံးချိုလေးတွေပေါ်မှာရော ပျားလေးတွေ “ဝဲ” နေတုန်းလား..!!
အနော် YKN အတွက်တော့ နတ်ဘုရားမလေးပါဆို... ဟွန်းး
“ကံမကုန်” သေးရင် “ပြန်ဆုံ” ချင်တဲ့ အနော့်ရင်မှာ ကဗျာတွေ “ခုန်ခုန်” လာပြန်ပေါ့..!!
တစ်ကယ်ပြောတာပါ.. ရင်နဲ့ရေးတဲ့ ဒီစာတွေသာ ကိုရန်အောင့် “မ” ဖတ်ရရင် ဘယ်လိုနေနိုင်မှာလည်းနော်..!!
ပြောရင်းဆိုရင်း ph လာနေပြီလားမသိ..!!
ကိုင်လိုက်ဦးလေ.... (:P :P :P)
ps. အော် “မ” ကိုလည်း..
(ကိုရင်၊ ခင်လေး၊ ကလေးလေး)က
ကိုရင်၊ ခင်လေး၊ ကလေးလေး
ဟဟဟား.. အော်.."မ" ...." မ " ..." မ"
ကိုရန်အောင်ရဲ့ မ ရေ... အဟတ်ဟတ်
မ တော့ မတိဘူး.. ဘေးလူတွေတောင် စိတ်ညစ်..အဲလေ... စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပါပြီ။
ပို့စ်လေးစဖတ်တော့ သနားရမလိုလို နဲ့ အောက်ပိုင်းရောက်တော့ အော်ရယ်ချင်သွားပြန်ရော.း)
ငိုလည်းငိုရတယ်.. ရယ်လည်းရယ်ရတယ်...း)
မ ၄ ကိုစောင့်မျှော်လျှက်
ကိုရန်အောင်ရဲ့ ရင်ထဲက ကဗျာတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်တဲ့ နတ်ဘုရားမလေး "မ" တစ်ယောက် ကိုရန်အောင်ကို အလွမ်းတွေ အဆွေးတွေ ပူဆွေးမှုတွေအစား အချစ်စစ်နဲ့ နေ့သစ်တွေတိုင်းမှာ စောင့်ကြိုလို့ ငါတို့ အစ်ကိုကြီး ပြုံးပျော်နေနိုင်ပါစေရှင်။
်အဟဲ အတုခိုးတာ ဟုတ်ဝူးနော်။ တကယ်ကျန်ခဲ့လို့။
ကဗျာ သံစဉ်လှလှလေးတွေကို ညည်းတွားနေနိုင်ပါစေလို့..... ဆုတောင်းပေးပါတယ် အစ်ကိုရေ့
ကိုရန်ကြီး .... "မ" နဲ့ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေပါစေဗျာ ၊၊
အလွမ်းတွေ ရင်ထဲဖြစ်လာတိုင်းသာ လက်ချောင်းတွေကနေ တစ်ဆင့် ဖွင့်ဟရေးသားရမယ်ဆိုရင် စာမျက်နှာတွေ ကုန်ဆုံးနိုင်မယ် မထင်ဘူးနော် ကိုရန်အောင်။ ချစ်သူနှင့်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင် :)
ဒီလူကြီး ခုတလော သိပ်ကဲနေပါလား...
ရည်းစား ပူပူနွေးနွေးရထားတာလား... သိဘူး...။ :P